[अनुभूति] मैले जे मन पराएँ - साहित्य - नेपाल
[अनुभूति] मैले जे मन पराएँ
- डा महेशकुमार मास्के
कवि महेश मास्केको अढाइ दशकअघि प्रकाशित कवितासंग्रह भोकका कैदीहरुसँगको भूमिकामा पारिजातले लेखेकी थिइन्, ‘मास्केका प्राय:जसो कवितामा शैली र विचार पक्ष कमोवेश सन्तुलित रहेका छन् । एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दा राख्दै पनि उनले कवितालाई नाराको भारी बोकाउन जान्दैनन् । परिपक्व कविताहरुको फूलबारी हो यो सँगालो ।’ उनै कवि मास्के कवि चिनारीपछि ‘गुमनाम’ भए । पछि उनी स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा डा महेश मास्के बनेर देखिए । अझ पछि चीनका लागि नेपाली राजदूत भनेर चिनिए । डा मास्केको बुझाइ र भोगाइमा किताब–लेखक संसारको विचरण यस्तो छ :
एउटा व्यक्ति के हो, कस्तो बन्न सक्छ भन्ने कुरा उसले पढ्ने पुस्तकमा पनि निर्भर हुन्छ भनिन्छ । मेरो हकमा सिंगो पुस्तकभन्दा पनि यसभित्रका छानिएका रचना र रचनाभित्रका पंक्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । मलाई ठूलो, मोटो र शास्त्रीय ग्रन्थभन्दा पनि सानोतिनो खुराकले सधैँ तानिरहन्छ । त्यो कविताको लाइन हुन सक्छ अथवा निबन्धको हरफ ।
मलाई सानैदेखि सबैभन्दा मन परेको गीति लाइन हो, ‘गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली ।’ विसं ०१७/१८ तिरको कुरा हो, हामी भानु प्राथमिक विद्यालयमा कराएर यो गीत गाउने गथ्र्यौं ।
त्यतिबेला यो गीत नै राष्ट्रगान थियो । कवि घिमिरेको ‘गाउँछ गीत नेपाली’भित्र राष्ट्रिय गौरवका धेरै कुरा समेटिएका छन् । तर, ‘ज्योतिको पंख उचाली’मा ठूलो तागत थियो । मेरो कलिलो मनले ज्योतिको पंख भएको नेपालीको कल्पना गर्न खोज्थ्यो र दंग पथ्र्यो । यो निकै बलशाली प्रतीक हो, जीउमा पखेटा हुनु, त्यो पनि प्रकाशको ! अहिले ६० वर्ष पुगेँ । संसारका धेरै देश घुम्न पाएँ र थरीथरीका संस्कृतिसँग साक्षात्कार गर्न पाएँ । त्यसैले जीउमा प्वाँख उम्रेको हो कि भन्ने भान पर्छ कहिलेकाहीँ । तर, त्यो कवि–कल्पनाजस्तो ‘ज्योतिको पंख’ बनेको लाग्दैन । बाल्यकालको त्यो कौतूहल यथावत् छ ।
केटाकेटी छँदा ‘कोर्सबुक’भन्दा बाहिरको किताब बढी पढ्न मन लाग्थ्यो । घरमा भएको तुलसीदासको रामायण (हिन्दी) र नेपालीमा टीका भएको महाभारत खुबै मन पथ्र्यो । यसले एउटा आधार बनायो, धार्मिक कुरा र कथनमा पनि थोरबहुत बहस गर्न सकिने बनायो ।
विद्यालयमा अलिक माथिल्लो कक्षा पुगेपछि कृष्ण पोखरेलले पढाउनुभयो । उहाँले सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविताको पंक्ति सुनाउनुहुन्थ्यो, ‘ बिनाक्रान्ति हुँदैन स्वच्छ शान्ति ...’ (क्रान्तिबिना थन दैमखु स्वच्छ शान्ति) र कक्षामा त्यसको व्याख्या गर्न लगाउनुहुन्थ्यो । राणाकालमा यो कविता लेखेकाले युवा सिद्धिचरणलाई १८ वर्ष जेल सजाय भएको थियो रे ! पोखरेल सर नेपालमा ‘लेफ्ट मुभमेन्ट’मा जोडिनुभएको रहेछ, यसकारण पनि उहाँले दिने गीत/कविताका उदाहरण अलिक भिन्न र बढी वैचारिक हुन्थे । मेरी सानिमा सूर्यकुमारी प्रधान पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो । उहाँ पनि वाम–आन्दोलनसँग जोडिनुभएको थियो । हाम्रै घरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ । कविता र वाम आन्दोलनप्रति मेरो रुचि उहाँहरूकै प्रभाव हो ।
०३० तिर विज्ञानमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ आएँ । त्यही दौरान पारिजात, राल्फाली वैचारिक अभियान, झापाली नक्सलवादी आन्दोलनहरू चर्चामा थिए । धरानतिरका एक जना आफन्त थिए, विवेक । चेतनामा अलिक भिन्न । उनी न कवि हुन्, न लेखक । तर, उनले गोपालप्रसाद रिमालको आमाको सपना कवितासंग्रह देखाउँदै भनेका थिए, ‘यो यस्तो कविता हो कि जतिपटक पढे पनि नयाँ लाग्छ ।’ रिमालसँग चिनारी गराएकामा ती आफन्तप्रति म सधैँ आभारी छुु ।
हो रहेछ । मैले पढेको नेपाली कवितामा आमाको सपनाको टक्करमा मलाई अरू लागेको छैन । त्यति थोरै शब्दमा व्यक्तिको प्रतीकमार्फत क्रान्ति अभिव्यक्त भएको (रिभोल्युसन पसर्निफाइड) रचना सायद यही मात्रै होला । एसएलसी बोर्ड फस्र्ट रिमालको जीवन बुझेर यो कविता पढ्ने हो भने त असाधारण रूपले जीवन्त र मार्मिक छ । ००७ को क्रान्तिको परिणामप्रति उदास–निराश हुँदै कवि रिमाल बहुलाएका थिए । आमाको सपना विषयवस्तुको सान्दर्भिकता पुनरावृत्त भइरहने कुरा हो । ठूलो आशापछि निराशा त आउँदो रहेछ । जस्तो : ०४६ को आन्दोलनपछिको निराशा अथवा ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको उदासी । माओवादी सशस्त्र युद्धको परिणाम । यी सबै परिणामको शाश्वत पक्षलाई कवि रिमालले आमाको सपनामा समेट्न सकेका छन् । तर, निराशालाई चिर्ने आशाको उज्यालो दिएर । गद्य कवितामा यस्तो सन्तुलन कहाँ पाउन सकिन्छ र ? यो मात्रै होइन, पछि बन्देजमा परेको गीत ‘रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो’लाई नै हेरौँ न ! गीतको एक–दुई लाइन नै अर्थ र अभिप्रायका हिसाबमा काफी छ, नेपाली जातिको गौरव बढाउने अर्थमा ।
हो, त्यही बेला म्याक्सिम गोर्कीकोआमा उपन्यास पनि निकै चलेको थियो । त्यही बेला युवाहरूको गीत, अजम्बरी गाउँजस्ता वैचारिक ज्वाला भएका चिनियाँ, भियतनामी मूल रचनाहरू नेपालीमा अनूदित भएर आएका थिए । ती पनि पढ्ने लहर चलेको थियो ।
समकालीन अर्थमा भूपी शेरचनको कविता कलात्मक सौन्दर्यले भरिएको छ । हामी कविताकै उदाहरण लिऔँ । एकदमै शक्तिशाली कविता हो यो । तर, ‘हामी’ कविता भने ‘नेगेटिभ सटायर’ हुँदै हँ‘ुदै अघि बढेको छ । यसमा आमाको सपनाजस्तो सन्तुलन/परावर्तन छैन । कि त भूपी प्रशंसै–प्रशंसाले भरिएको सहिद लेख्छन्, ‘हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नगए/बन्दैन मुलुक दुई–चार सपुत मरेर नगए’ कि लेख्छन्, ‘मरेर सहिद हुनेहरू हो, जिएर त हेर जिउनु झन् गाह्रो छ ।’ बरू पारिजातको ‘मृत्यु’जस्तो कवितामा सन्तुलन पाउन सकिन्छ । यहाँ निराशालाई ‘ओभरकम’ गरेको बुझ्न सकिन्छ । तैपनि, मेरो कम अध्ययनमा सम्पूर्ण आयाम भएको कविता भनेको आमाको सपना नै हो, कवि रिमाल नै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
भूपीको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कवितासंग्रहले पनि हामीलाई त्यसबेला निकै प्रभाव पारेको हो । तर, भूपीले त्यसै बेला साहित्यिक पत्रकार उत्तम कुँवरलाई स्रष्टा र साहित्यमा अन्तर्वार्ता दिइसकेका थिए । त्यहाँ उनले भनेका थिए, ‘म दुईवटा कबाट पीडित छु, एउटा कविता र अर्को कम्युनिस्ट ।’ त्यही बेला मैले ‘भूपीलाई चिट्ठी’ भन्ने कविता लेखेको थिएँ । त्यो कविता समीक्षामा छापिएको थियो । मेरो कवितासंग्रह भोकका कैदीहरूसँगमा पनि संकलित छ ।
उसो त मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचना पनि अलिअलि पढेँ । देवकोटा आफैँ क्रान्तिमा पनि होमिनुभो, दु:ख पाउनुभो, बाल–बच्चाहरू छाडेर बनारस पनि जानुभो । तर, उहाँका कविताहरूमा स्वच्छन्दतावादकै बाहुल्य लाग्छ मलाई । सामाजिक चेतनाप्रधान भएका कविताहरू अलिक घुमाउरो पारामा लेखिएका छन् । जस्तो : ‘पागल’ कविता हेरौँ न । मुनामदन अर्कै खालको रचना हो, जहाँ सामाजिक रूपान्तरणको सिंगो चित्र पाउन सकिन्न तर रिमाल ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’ भनेर एकैचोटि धेरै कुरा भन्न भ्याउँछन् । देवकोटाका ‘यात्री’, ‘प्रश्नोत्तर’जस्ता दार्शनिक कविताहरू भने बेजोड लाग्छन् ।
अस्कल क्याम्पसमा हामी विज्ञानका विद्यार्थीहरू एकैसाथ बैरागी काइँला, मोहन कोइराला, ईश्वर बल्लभहरू पनि पढ्थ्यौँ । ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ले के भनेको होला भन्दै हाँस्थ्यौँ पनि । पारिजातहरूको प्रभावले बढी काम गरेको होला । जस्तो : बीपी कोइरालाकै सुम्निमा मलाई निकै मन परेको उपन्यास हो । तर, तीन घुम्ती निकै चर्चा भए पनि ठीकठीकै मात्र लाग्यो ।
बीपीलाई जसरी साहित्यमा उच्च मूल्यांकन गरिन्छ, त्यो उचाइ भने मलाई लाग्दैन । मैले सबै नपढेर हो कि ? तर, रातदिन राजनीतिमा खट्नुपर्ने शीर्षस्थ नेताले त्यति धेरै कालजयी रचनाहरूको सिर्जना कसरी गरे होलान् भनेर छक्क भने पर्छु । पारिजातकै हकमा मलाई उनको तोरीबारी, बाटा र सपनाहरू सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्छ । अरूहरूले भनेजस्तो र अति बयान गरिने शिरीषको फूलले मलाई खासै प्रभाव पारेन । शिरीषको फूललाई लिएर मेरो पारिजातसँग पनि कुराकानी भइरहन्थ्यो । यो किताब भनेको एउटा ‘अनेस्ट राइटिङ’ पक्कै हो । आफ्नो ‘सर्कल’मा आइरहने साथीभाइ, आफन्तबाट पारिजातले शिरीषको फूलका पात्रहरू लिनुभएको छ । जस्तो : गोर्खा सैनिकको उदाहरण हेरौँ । सकम्बरीलाई राणा परिवारको प्रतिनिधि पात्र बनाइएको हो । धेरैले पारिजात स्वयंलाई सकम्बरीको प्रतिरूप भनेका छन् ।
तर, त्यसो होइन । यी दुवै पात्र गोर्खा सैनिक र सकम्बरीमा खोक्रोपना बढी छ, जीवनको बाहिरी रवाफ यहाँ देखिन्छ । यहाँ कसैलाई पनि लेखकले सहानुभूति दिएकी छैनन् । पारिजात दार्जीलिङ पृष्ठभूमिबाट आएकाले गोर्खा सैनिकको ढोंगलाई देखाउन चाहनुभएको रहेछ । यही पृष्ठभूमिमा शिरीषको फूल जन्मेको हो । आफ्नै शारीरिक कठिनाइ भएको अवस्थामा बहिनी सुकन्याले कलम समाइदिएर लेख्न थाल्नुभएको हो । त्यही कालखण्डमा शिरीषको फूल लेखिएको हो भनेर पारिजात स्वयंले भन्नुभएको छ ।
गजब के छ भने पारिजातले आफ्नै ‘रियलाइजेसन’बाट शिरीषको फूलभन्दा माथि उठ्ने काम गर्नुभएको छ । पारिजात राल्फाहरूसँग मिसिएर एक हदसम्म नेतृत्व नै गरेर बाहिर ननिस्केको भए र कोठामै गुम्सेर बसेको भए सायद अहिलेको पारिजात पाउन मुस्किलै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हो, शिरीषको फूलको शैलीको सबै प्रशंसक छन्, यसको विवाद र बहस भनेको यसको अन्तर्वस्तुबारे हो । शिरीषको फूल कि कागजको फूल ? भनेर गोविन्द भट्टले समालोचना लेख्नुभएको थियो । त्यो बिझाउने खालको समालोचना थियो । तर, मार्गदर्शक बन्यो, स्वयं पारिजातका लागि पनि । दर्शनशास्त्रका अध्येता भट्टले बीपी, देवकोटा सबैको लेखनको मीमांसा गर्नुभएको छ र माक्र्सवादी समालोचनाको एउटा मानक स्थापित गर्नुभएको छ । पारिजातको आफ्नै भोगाइबाट भट्टका शब्दहरूको अर्थको नजिक पुग्नुभयो ।
होस्टलमा बसेर पढ्ने विद्यार्थी भए पनि मेरो संगत बाहिरतिर थियो । जस्तो : पारिजात, निनु चापागार्इं, निर्मल लामा आदि । बुझे पनि नबुझे पनि माक्र्स, एंगेल्स, माओ, चे–ग्वेभारा पढिन्थ्यो, त्यसबेला । निर्मल लामाको घरमा भएको पुस्तकालयमा यस्तै किताब प्राय: भेटिन्थे ।
०३४ सालमा एमबीबीएसको पढाइका क्रममा भारत, दरभंगा गएँ । त्यहाँ पढ्ने सामग्री खासै केही थिएन । पुस्तकालय पनि नाम मात्रैको हुन्थ्यो । बरू, फुटपाथमा पुराना किताबहरू भेटिन्थे, सस्तो मूल्यमा । त्यसमा जवाहरलाल नेहरुका किताबहरू, नेभिल म्याक्सवेलको इन्डियाज चाइना वार आदि पाएको थिएँ । राहुल सांकृत्यायनको दर्शन दिग्दर्शन, देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायको ह्वाट इज लिभिङ एन्ड ह्वाट इज डेड इन इन्डियन फिलोसफी, के दामोदरनको भारतीय चिन्तन परम्पराको नाम स्मरण गर्न चाहन्छु । यी किताब मेरो संग्रहमा छन् । यिनले दर्शनलाई माक्र्सवादी चिन्तनबाट केलाउने काम गरेका छन् । नेहरुका किताब र लेखन शैली मेरो मनपर्ने सूचीमा छन् । नेहरुको ग्लिम्प्सेस अफ वल्र्ड हिस्ट्री, डिस्कभरी अफ इन्डिया र माइ अटोबायोग्राफी हुन् ।
एक क्यानेडियन सर्जन थिए, डा नर्मन बेथुन, जसको निधन चीनमा भयो, सन् १९३९ मा । उनी मेरो हिरो हुन् । उनको जीवनीमाथि लेखिएको किताब द स्कालपेल एन्ड द स्वर्ड साह्रै रोचक लाग्छ । लेख्ने शैली बेजोड भएकाले पनि हुन सक्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रको ज्ञान दिने द पोलिटिकल इकोनमी अफ डेभलपमेन्ट एन्ड अन्डर–डेभलपमेन्ट एउटा लेखसंग्रह हो, यो पनि पठनीय छ । स्वास्थ्य जगत्को कुरा गर्दा सन् १९७५ मा आएको हेल्थ बाइ अल पुस्तक मेरो पढाइ र अनुभवमा सहयोगी बन्यो । सन् १९७८ मा काजकिस्तानमा भएको अल्माटा कन्फरेन्सको आधार पुस्तक यही हो । पौल एम स्विजी र मोरिस डबको ट्रान्जिसन टू सोसलिज्म भन्ने बहसको पुस्तक पनि मेरो रोजाइमा पर्छ । रोजा लक्जेम्बर्गको सोसल रिफर्म अर रिभोल्युसनलगायतका पुस्तक पनि मैले ध्यान दिएर पढेँ ।
मैले पढ्न रुचाउने कविता नै हो । तर, पछिल्लो समयमा भने म निकै पछि परेको छु । समय निकाल्न पाएको छैन । अहिलेका युवा कविका रचनाहरू मनग्गे अध्ययन गर्न पाएको छैन । अहिले मिडिया र सोसल मिडियाको विस्तारले कुनै पनि लेखन/कृतिको चर्चा वा अतिचर्चा हुने सम्भावना बढेको छ । तर, यो चर्चा कत्तिको टिक्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । कृतिगत कुरा गर्दा विजय मल्लको कोही किन बरबाद होस् भनेजति चर्चामा आएन भन्ने मलाई लाग्छ । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाजीको पनि यस किताबका बारेमा यस्तै धारणा सुनेको छु ।
एउटा तथ्य के हो भने नेपालमा कविहरूको कमी छैन । कवि र कवितामा निकै उर्वरभूमि हो नेपाल । तर, कविहरू शब्द–संयोजनबाट अघि बढ्छन् कि, त्यहीँ अड्केर बस्छन् भन्ने हो । उनीहरू धरातलमा जोडिएका छन् कि छैनन् ? हो, अहिले कुनै ‘मुभमेन्ट’ छैन, सामाजिक र राजनीतिक सतहमा निकै सहज स्थिति छ । तर, कविता आफैँले एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने सत्यलाई कविले नबिर्सिदिए हुन्थ्यो ।